Akuko Norton: Mkpa wayo teknụzụ na -eyi egwu nke 1
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Akuko Norton: Mkpa wayo teknụzụ na -eyi egwu nke 1
Ndị otu nyocha ụwa zuru ụwa ọnụ nke NortonLifeLock, Norton Labs, bipụtara taa Akuko Pulse Safety Pulse Consumer nke atọ nke ụzọ atọ, na-akọwapụta oke nghọta nke ndị na-eji ngwa ahịa cybersecurity na wereaways site na Julaị ruo Septemba 2021. Nchọpụta kachasị ọhụrụ na-egosi aghụghọ nkwado teknụzụ, nke na-abịakarị dị ka ịmịpụta mmapụta. ejiri aha na akara nke nnukwu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ emechie onwe ya, aghọọla ihe iyi egwu kachasị maka ndị na -azụ ahịa. A na-atụ anya na wayo nkwado teknụzụ ga-aba ụba n'oge ezumike na-abịanụ, yana mwakpo phishing metụtara ịzụ ahịa na ọrụ ebere.
Norton gbochiri URL ndị na -akwado teknụzụ karịrị nde 12.3, nke butere ndepụta nke iyi egwu maka izu iri na atọ n'etiti July na Septemba. Ọdịmma nke ụdị wayo a arịgoro n'oge ọrịa na -efe efe n'ihi oke ntụkwasị obi nke ndị na -azụ ahịa na ngwaọrụ ha ijikwa usoro ọrụ ngwakọ na ihe omume ezinụlọ.
Darren Shou, onye isi teknụzụ, NortonLifeLock na -ekwu, "aghụghọ nkwado teknụzụ na -adị irè n'ihi na ha na -erikpu egwu ndị ahịa, ejighị n'aka na obi abụọ iji ghọgbuo ndị nnata ka ha kwere na ha na -eche oke iyi egwu nchekwa cybersecurity ihu." “Mmata bụ nchekwa kacha mma megide mwakpo ndị a ezubere iche. Akpọla nọmba edepụtara na mmapụta nkwado teknụzụ, kama kpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ ozugbo site na webụsaịtị ha iji kwado ọnọdụ na usoro ndị ọzọ. ”
Norton gbochiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 860 iyi egwu nchekwa Cyber ​​n'ime nkeji iri na ise gara aga, gụnyere nde faịlụ 41, faịlụ mkpanaka 309,666, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde nyocha 15 na nchọpụta mgbapụta 52,213.
Nchọpụta ndị ọzọ sitere na Akuko Pulse Safety Consumer Cyber ​​gụnyere:
Ngwa ahịa egwuregwu mebere nwere ezigbo uru: Ihe na-adịkarị ụkọ, n'ime egwuregwu ka a na-achọsi ike ma nwee ike ree ya n'ọma ahịa ụwa. Dịka ọmụmaatụ, egwuregwu ọtụtụ mmadụ na-eme n'Ịntanet na-egosi "Party Hat" na-acha anụnụ anụnụ, nke kacha ọnụ ahịa na nso nso a n'ihe dị ka $ 6,700. Norton Labs jidere mkpọsa phishing ọhụrụ emebere iji nweta nzere nbanye nke ndị egwuregwu yana ozi nyocha ihe abụọ nwere ebumnuche izu ohi na ire ụdị ihe ahụ dị oke ọnụ ahịa.
Peeji nke ụlọ akụ ịntanetị adịgboroja na -ekwenye: Ndị nyocha Norton Labs chọpụtara mkpọsa phycode phycode na -ezubere ndị ahịa ụlọ akụ nwere nnomi carbon dị nso na ezigbo ebe obibi ụlọ akụ iji ghọgbuo ha ịbanye nzere ha.
Kaadị onyinye ezuru ezu (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ) ezigbo ego: Karịsịa ka ezumike dị nso, ndị na -azụ ahịa kwesịrị ịma na kaadị onyinye bụ isi ebumnobi maka ndị mwakpo n'ihi na ha nwere nchekwa dị ala karịa kaadị kredit ma ejikọghị ya na aha otu onye. Ọzọkwa, ọtụtụ kaadị onyinye bụ otu ụlọ ọrụ nwere nọmba ọnụọgụ 19 na PIN ọnụọgụ 4. Ndị mwakpo na -eji webụsaịtị ezubere ịlele itule kaadị onyinye iji kpughee nọmba kaadị dị mma na njikọta pin, na -enye ha ohere ịnweta ego ahụ.
Ndị omekome na -aga n'ihu gbado anya na nzukọ Roman Katọlik na Vatican: Nchọpụta New Norton Labs na -egosi ndị na -agba ọsọ, nwere ike na -arụ ọrụ na China, na -ezube Chọọchị Roman Katọlik na Vatican. N'otu oge, ndị nyocha hụrụ malware ezubere iche na faịlụ ndị yiri ezigbo akwụkwọ metụtara Vatican mana na-ebute ngwaọrụ ndị ọrụ na-enweta akwụkwọ ahụ. N'ọnọdụ nke abụọ, achọpụtara kọmpụta ndị dị na Vatican etinyela malware. Ọ bụ ezie na ụdị mwakpo a ezubere iche na -ejikọkarị ya na nnukwu ọgbakọ, ndị otu nwere mmasị pụrụ iche, ndị na -ekwenye ekwenye ma ọ bụ ndị nwere ọrụ nwere ike nwekwara ike ịdakwasị mwakpo yiri nke ahụ, ndị na -azụ ahịa n'ozuzu kwesịrị ịmụrụ anya megide mkpọsa phishing na ibe weebụ nwere ọrịa.